आज २०७६ असोज २३ गते विहीबार तपाईको भाग्य कस्तो छ ? थाहा पाउनुहोस् – Jaljala Online
Posted on October 10, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
आज २०७६ असोज २३ गते विहीबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रोलोजर राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
पुडा’सैनी प्रकरण: चितवन प्रशासनले जारी गर्‍याे यस्तो कडा आदेश, अब के होला ?
भदौ ९, काठमाडौं । पत्रकार शालि’कराम पुडा’सैनी आत्मह’त्या प्रकरणमा पक्राउ परेका ‘सीधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामि’छानेका समर्थकले चितवनमा गरिरहेको प्रदर्शन हिं’सात्मक हुन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने आदेश जारी गरेको छ। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले आदेश जारी गर्दै सोमबार बिहान ६ बजेदेखि लागू हुने गरी जिल्लाका विभिन्न […]
‘बस दुर्घटना हुनुअघि ड्राइभरले यसो भनेका थिए’ [नालीबेलीसहित]